IGUMBI LE-CHALK - Domaine de Vermoise
Sainte-Maure, Grand Est, i-France
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Aude
1h30 ukusuka eParis, ihora elingu-1 ukusuka eReims nemizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha laseTroyes nezitolo zayo zefekthri. I-Domaine de Vermoise iyakwamukela endaweni yayo eyingqayizivele enepaki elinezinkuni lapho ukuzola nokuthula kungamagama ayisihluthulelo. Indlu yezivakashi itholakala esithasiselweni senqaba futhi izoba yindawo efanelekile yokubaleka kwe-Aube, indawo yokuma, umcimbi ochwepheshile (isemina, inkomfa) noma owomuntu siqu (umshado, usuku lokuzalwa).
Leli gumbi lokulala eliphezulu livulekile futhi linekhona lokufunda elithokomele kakhulu. Amathayela awo oqobo eterracotta akunikeza isinyathelo sangempela sokubuyela emuva. Njengoba uhlola leli gumbi uzobhekana ngqo neziko elidala kanye nodonga lwalo lukashoki olulungisiwe. Indlu yayo yokugezela inobhavu. Izindlu zangasese zizimele.
Abanikazi bazokujabulela ukukwazi ukukukhombisa amakamelo abo amane ezitayela ezahlukene nezangempela zokunethezeka okukhulu. A "lenhle" indawo ezizimele ngehora elilodwa (sauna, Hammam, Jacuzzi) lisesandleni sakho ngaphezu for 20 € umbhangqwana ngamunye ngokuvumelana nemithetho yenhlanzeko (magciwane nokushaya komoya Imininingwane phakathi azimele ngamunye) ngesikhathi futhi ungakwazi ukujabulela ukunconywa ibhulakufesi nasekunambitheni kwakho endlini noma ethafeni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sainte-Maure namaphethelo